Orinasa mpanamboatra fitomboan'ny zavamaniry, mpamatsy - Mpanamboatra mpandrindra fitomboana ao Shina
Ny Gibberellic Acid (GA3) dia mpandrindra fitomboan'ny zavamaniry marindrano mahomby be, izay afaka mampiroborobo ny fambolena sy ny fivoaran'ny vokatra, mihamatotra aloha, manatsara ny kalitao sy ny vokatra. Izy io dia afaka manapaka haingana ny fatin'ny taova misy voa, tubo ary takamoa, mampiroborobo ny fitsimohany, mampihena ny fandatsahan'ny tsiry, voninkazo, lakolosy ary voankazo, manatsara ny taham-boankazo na mamoa voankazo tsy misy voa. Izy io koa dia afaka manova ny tahan'ny voninkazo lahy sy vavy, mitaona ny fotoana voninkazo.
6-Benzylaminopurine (6BA) dia mpandrindra fitomboan'ny zavamaniry marindrano, io no cytokinin synthetic voalohany, izay tsy mety levona anaty rano, mety levona kely amin'ny etanol, miorina amin'ny asidra sy alkaly.
Kinetin dia karazana cytokinin endogenous, izay iray amin'ireo hormonina lehibe dimy an'ny zavamaniry. Ny anarana simika dia 6-Furfurylaminopurine (na N6-Furylmethyladenine). Izy io dia hormone voajanahary purinina an'ny purine, ary izy io koa no voalohany hitan'ny olombelona, ​​izay azo amboarina sahady amin'ny artifisialy. Izy io dia saika tsy voavaky anaty rano, étanol, ether ary acétone ary mety levona amin'ny asidra maloto na asidra acétataly glacial.
Ny asidra 3-Indolebutyric (IBA) dia auxine tsy misy fangarony, ny vokatra madio dia kristaly fotsy matevina, ary ny fanafody tany am-boalohany dia fotsy kristaly mavo maivana. Izy io dia mety levona amin'ny solvent solika toy ny acetone, ether ary éthanol, fa zara raha mety levona anaty rano.
3-Indoleacetic acid (IAA) dia karazana auxin endogenous ubiquitous amin'ny zavamaniry, izay an'ny indole compound. Vokatra biolojika io. Ny vokatra madio dia kristaly ravina tsy misy loko na vovoka kristaly. Mivadika loko mavokely rehefa tratry ny hazavana. Mora simba amin'ny etanol tanteraka, etil acétate, dichloroethane ary soluble amin'ny ether sy acétone izy io. Tsy voavaha amin'ny benzene, toluene, lasantsy ary klôrooform. 3-Ny asidra Indoleacetic dia manana ny fambolena fitomboana, ary ny faritra samihafa amin'ilay zavamaniry dia samy manana ny fahatsapany azy.
Ny asidra 1-Naphthylacetic (NAA) dia karazana mpandrindra fitomboan'ny zavamaniry Broad-spectrum, vovoka kristaly fotsy, tsy misy tsirony. Ny teboka mitsonika dia 130 ～ 135.5 ℃, azo ovaina amin'ny hafanana. Izy io dia mety levona amin'ny vahaolana acetone, etera, chloroform, benzene, asidra acetic ary vahaolana alkali.
Forchlorfenuron dia mpandrindra fitomboan'ny zavamaniry phenylurea miaraka amin'ny hetsika cytokinin. Soluble amin'ny acetone, ethanol, ary dimethyl sulokside. Ampiasaina betsaka amin'ny fambolena sy ny zaridaina ary ny hazo fihinam-boa izy io. Mampiroborobo ny fizarana sela sy ny fanitarana ary ny fanitarana, mampiroborobo ny fitomboan'ny voankazo, mampitombo ny vokatra ary mitazona ho vaovao.
Thidiazuron dia mpandrindra fitomboan'ny zavamaniry urea miaraka amin'ny hetsika cytokinin. Ampiasaina indrindra amin'ny famotehana landihazo. Rehefa avy tototry ny zavamaniry i Thidiazuron dia afaka mampiroborobo ny fananganana voajanahary ny sela misaraka eo anelanelan'ny ravina sy ny fotony ary mihintsana. Io dia defoliant tsara.
Ny asidra 4-Chlorophenoxyacetic dia mpandrindra fitomboan'ny zavamaniry miovaova rafitra sy mandaitra ary tsy misy fofona manokana. Soluble amin'ny etanol, acetone ary benzene. Milamina amin'ny medium asidra, miorina amin'ny hazavana sy hafanana. Izy io dia ampiasaina ho toy ny mpandrindra fitomboana ary mpitsabo fisorohana voankazo.
Diethyl Aminoethyl Hexanoate (DA-6) dia mpandrindra fitomboan'ny zavamaniry miaraka amina velarana lehibe sy vokam-pivoarana. Izy io dia mety levona amin'ny solvent solika toy ny etanol, methanol, acetone, ary chloroform; miorina tsara amin'ny fitehirizana azy amin'ny hafanan'ny efitrano.
Paclobutrazol dia mpandrindra fitomboan'ny zavamaniry triazole, izay mety amin'ny vary, varimbazaha, voanjo, hazo fihinam-boa, paraky, voasarimakirana, soja, voninkazo, bozaka ary voly hafa, misy fiatraikany lehibe.
Ny kalsioma Prohexadione dia mpandrindra ny fitomboan'ny zavamaniry. Mora ny mamotipotika amin'ny medium asidra, miorina amin'ny medium alkaline, ary manana fahamarinan-toerana tsara.